सुन्धाराको होटलबाट युवती मृत फेला, प्रेमीबाट हत्या भएको आशंका - राष्ट्रखबर-Nepal's Popular Digital Newspaper
राष्ट्र सुन्धाराको होटलबाट युवती मृत फेला, प्रेमीबाट हत्या भएको आशंका
सुन्धाराको होटलबाट युवती मृत फेला, प्रेमीबाट हत्या भएको आशंका
February 24, 2018 rastrakhabar 0
सुन्धारास्थित होटलमा शनिबार बिहान एक युवती मृत भेटिएकी छन् । उदयपुरको कटारी–९ घर भइ हाल हात्तिवन बस्दै आएकी २४ वर्षीय सर्मिला राउत सुन्धारास्थित निकुद गेष्ट हाउसको १०४ नम्बर कोठामा मृत भेटिएकी हुन् । उनी सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिका–३ का २३ वर्षीय विशाल खड्कासँगै होटलमा पुगेकी थिइन् । खड्का र राउत करिब डेढ वर्षदेखि प्रेम सम्बन्ध रहेको खुलेको छ ।
होटल सञ्चालक सुन्दर श्रेष्ठले खबर गरेपछि महानगरीय प्रहरी वृत, जनसेवा र महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाको टोलीले घटनास्थलमा पुगेर मुचुल्का उठाएको छ । प्रहरीका अनुसार राति उनीहरुसँगै थप दुई युवक होटलमा पुगेका थिए, जो ५०१ नं. कोठामा बसेका थिए । घटनाको अनुसन्धानका लागि प्रहरीले प्रेमीसहित ३ जनालाई नियन्त्रण लिएको छ ।
दुवै जना काठमाडौंको एक फाइनान्स कम्पनीमा कार्यरत थिए । युवतीले तीन महिनाअघि मात्रै जागिर छाडेर म्यानपावरमा काम गर्न थालेकी थिइन् । जनसेवाका डिएसपी टेकुनन्द लिम्बुले युवतीको शवलाई पोष्टमार्टमका लागि टिचिङ हस्पिटलमा लगिएको बताए ।
काठमाडौ उपत्यकामा किन गोरुले जोत्ने गरिदैन ? थाहा पाईराख्नुहोस
नर्भिक अस्पतालको गम्भिर लापरवाही,देब्रे घुंडामा गर्नुपर्ने शल्यक्रिय दाहिनेमा